“Mohamed Salah Waa Kan Ugu Fiican, Ee Ma Ahan Lionel Messi” – Gool FM
“Mohamed Salah Waa Kan Ugu Fiican, Ee Ma Ahan Lionel Messi”
(Afrika) 24 Abriil 2018 Madaxweynaha xiriirka kubada cagta Afrika Mr Ahmad Ahmad ayaa ku tilmaamay horumarka xidiga xulka qaranka Masar ahna ciyaaryahanka ugu fiican Afrika, inay ka dhigeyso in xitaa uu ka fiican yahay mucjisada xulka qaranka Argantina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi.
Mr Ahmad Ahmad ayaa carabka ku adkeeyay in heerka uu bixiyay Salah xilli ciyaareedkan uu kaga sara mari karo dhigiisa kooxda Barcelona, gaar ahaan xili uu laacibka reer Masar si xoogan ugu tartamayo kabta dahabka ee ah gool dhaliyaha ugu sareeya shanta horyaal ugu waaweyn qaarada Yurub.
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta Afrika oo la hadlayay warbaahinta ayaa wuxuu yiri: “Mohamed Salah waa kan ugu fiican, ee ma ahan Lionel Messi”.
Salah ayaa dhaliyey 31 gool ee ah horyaalka Premier League, kahor 3 kulan dhamaadka xili ciyaareedkan, xili laga war qabo in dhawaan uu ku guuleystay abaal marinta xidiga sanadka ee horyaalka Premier League ugu fiican
Xidiga xulka qaranka Masar ayaa abaal marintan tartan adag kula galay xidigo dhowr ah, oo ay ka mid ahaayeen kuwa kooxda heysata horyaalka Premier League ee Kevin De Bruyne iyo Leroy Sané.
Manchester City oo beenisay inay iska iibinayso John Stones
5-ta Ciyaaryahan iyo 5-ta Tababare ee ugu Mushaarka badan kubbada cagta kal ciyareedkan oo la soo saaray